Shina: Pehana Koa Izao Ny Fitaovana Fandinganana · Global Voices teny Malagasy
Shina: Pehana Koa Izao Ny Fitaovana Fandinganana
Voadika ny 15 Mey 2011 10:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, English
Maromaro ireo Sinoa mpiondana aterineto no nitatitra fa nanomboka tamin'ny 6 May 2011 dia najary tena sarotra tokoa ny mitsidika ireo vohikala vahiny avy amin'ny alalan'ny tolotry ny China Telecom sy China Unicom. Tamin'ity indray mitoraka ity ny fahatapahana dia nahazo indrindra indrindra ny fifandraisan'ireo vondron'orinasa, tafiditra anatin'izany ny anjerimanontolo, raha toa kosa ka nandeha tsara ny ADSL tany amin'ny isan-tokantrano.
Ny sasantsasany tamin'ireo mpitoraka bilaogy mikasika ny teknolojia dia nanasongadina fa ny Great Fire Wall izao dia afaka manara-maso ny votoatin-javatra atosaka amin'ireo adiresy IP ao an-toerana ary mametraka sakantsakana rehefa mahita fidirana maromaro mankany amina adiresy IP vahiny. Manahy ny sasany fa hoe ilay rafitra dia mety hiafara amin'ny famoronana lisitra fotsy misy ireo vohikala vahiny fotsiny amin'izao .
Ny fifandraisan'ireo vondron'orinasa sy anjerimanontolo tratra
Mpitoraka bilaogy iray momba ny teknolojia be mpanaraka tokoa i William Long manasongadina fa ny fanakanana tamin'ity indray mitoraka ity dia nikendrena ireo mpampiasa avy amina vondron'orinasa mba hanakanana ny olona tsy hitsidika vohikala vahiny miainga avy amin'ny fifandraisana sy ny tambajotran'ny vondrona.
Nanao andrana avy ao amin'ny biraony izy tao Shenzhen ary nahita fa tsy afaka miditra amina adiresy IP vahiny sasantsasany (119.145.47.102). Ity ambany ity no maneho ny valin'ilay andrana :
Ny Anjerimanontolo Fianarana Ho Mpitsabo any Atsimo ihany koa dia nijaly noho izay fahatapahana izay ary nanazava ny toe-draharaha tamin'ny hoe i China Telecom no nametraka sakantsakana tamin'ny adiresy IP an'ny anjerimanontolo mankany amin'ireo vohikala vahiny. Ny anjerimanontolon'i Zhejiang koa dia tratry ny olana tahaka izany [zh], ny tambajotra VPN-n'ny sekoly mifandray amin'ny any ivelany no tapaka. (via William Long)
Tsikilovina ny votoatim-pifandraisana
Tao amin'ny Sina Microblog, maro no namerina nanaparitaka ity vaovao manaraka ity:
Maro amin'ireo orinasa eo amin'ny sehatry ny aterineto ao Sina no misedra olana amin'ny fifandraisana ao anatin'ny Tanibe, ka isan'izany i Baidu, Tencent, Alibaba ary orinasa zana-tsampany. Napetraka ny sakantsakana amin'ny fidirana amin'ireo vohikala vahiny, isan'ireny ny mnkany amin'ny tahirin-drindram-baikon'ny Apple Company. Ny mpandalina sasany dia nilaza fa ny GFW izao dia afaka mamaky koa ireo hafatra afenina sady manakana adiresy IP iray voafaritra. Maro amin'ireo ‘port’ an'ireo orinasa eo amin'ny sehatry ny aterineto no eo ambany teritery..
Voarara ny VPN sy ny fitaovana fandinganana
Mba hamahana io olana io,. ny departemanta misahana ny infaormatika sy ny teknolojia (IT) any amin'ny vondron'orinasa sasany dia namoaka fampitandremana toy ireto: (tamin'ny anarana mpampiasa Twitter @yegle)
Iangavina mba tsy hitsidika vohikala vahiny afa-tsy izay mifandray amin'ny asanao azafady, aza atao ny mampiasa fitaovana fandinganana mba hitsidihana ireo vohikala any ambadiky ny rindrina.
Rehefa nodinihana akaiky ilay mailaky ny IT dia toy izao: rehefa mitsidika ireo vohikala vahiny, dia mila mandefa mialoha ny anaran'ny sehatra sy manazava ny anton'ny itsidihana azy ny olona.
Namerina nandefa ilay fampitandremana: Ry mpiara-miasa hajaina, Rehefa mampiasa ny tambajotran'ny vondron'orinasa ianao, ampiasao ny fitaovana fandinganana sy ny VP mba hidirana amin'ireo vohikala vahiny. Ny fihetsika toy izany dia mitarika amin'ny fibahanana ny ‘port’ sy ny adiresy IP fifandraisan'ny orinasa mankany ivelany ( ohatra, hiditra amin'ny Google sy ny MSN dia efa lasa olana be). Hiteraka olana ho an'ny orinasa sy ny isam-batan'olona koa izany. Azafady, mitandrema ary ezaho ny hisoroka an'io amin'ny asa ataonao isan'andro.
Fampitandrema iray avy amin'ny Akademia Sinoa momba ny Siansa dia nanamafy ny resaben'ireo mpiondana aterineto:
TRANGA IHEP: Ny fahafahan'ny fakioltenay miditra amina vohikala vahiny dia notapahana tato anatin'ny andro vitsy. Taorian'ny fanadihadiana, nuy antony dia satria nisy tamin'ireo mpampiasa no nampiasa fitaovana fandinganana mba hidirana tamin'ireo votoaty voarara, tafiditra anaty lisitra maintin'ny Birao misahana ny Filaminam-Bahoaka ny adiresy IP an'ny fakioltenay. Eto aho dia mampahatsiahy ny tsirairay mba hanaraka ny fepetra rehefa miditra aterineto, aza mampiasa fitaovana tsy ara-dalàna mba hidirana aminà zavatra tsy ara-dalàna!